Isimo esiyinhloko sokuthuthukiswa okuphumelelayo kumdlalo we-multi-player World of Tanks ukudubula okulungile ezimotweni zezitha zesitha, lapho izikhali zeTanki ziqeda ukudubula eyodwa, futhi lokhu kukhutshaziwe. Kuze kube manje, kunezinyathelo eziningi ezisiza ukufeza umgomo obekwe ngaphambi komdlali. Kodwa okubaluleke kakhulu kubo ukwazi amaphuzu abuthakathaka amathangi. I-World of Tanks iqoqe izinhlobo eziningi zemishini yempi, ikopisha ngokuphelele izimoto zokulwa zangempela, ngakho-ke kufanelekile ukucubungula izinketho eziningi ezingasetshenziswa yibo bonke abadlali ngaphandle kokuhlukile. Lokhu kuzokuvumela ukuba uthole ama-credits amaningi, futhi nokukhulisa ukulinganisa kwakho kokudlala.
Yini okufanele icatshangelwe lapho kudubula amathangi?
Njengoba imodeli ngayinye yamathangi enezici zayo siqu, kuhlanganise nokuqina kwesibhamu, i-angle yokuthambekela kwayo, ijubane lokunyakaza nokudubula, ake sihlale kulowo maphuzu azosiza ukuthola indlela yokubhubhisa noma yimuphi wabo. Isici salo lonke uhlobo lwemishini, esethulwa emdlalweni wezwe lomhlaba wamathangi, - izikhali zemathangi, ngokuphindaphindiwe amakhophi asekuqaleni. Yingakho ukuphela kwawo kusuke kunamandla kakhulu, okusho ukuthi akusilo umqondo ukudubula kuso. Uhlangothi olungemuva kombhoshongo kanye nehholo lincane kakhulu, ngaphezu kwalokho, kusuka kule ndawo, ngekhono elikhethekile, umshayeli wokudubula angenza umonakalo ongenakuqhathaniswa nesitha, alahle izinhlamvu zakhe.
Kubalulekile futhi ukukhetha ukubona okulungile, okungeke uphuthelwe kuwo. Kulezi zinhlobo ezintathu - okuzenzekelayo, mahhala futhi ezinamathele - kunengqondo ukuyeka ukukhetha ukhetho lwesibili. Ngaphezu kwalokho, kubalulekile ukusebenzisa amagobolondo afanelekile, ngoba izikhali eziningi eziqinile ezibhekene nezimoto eziningi zibhekwa njengabadlali abaningi abangenalwazi abangenakukwazi ukungena. Njengoba inamandla kakhulu futhi inkulu kakhulu ukukhokhwa, inkulu amathuba okwenza umonakalo omkhulu ku-tank yesitha. Noma kunjalo, lokhu akusebenzi ngaso sonke isikhathi. Kuleso simo, isibonelo, nge-"Mau" tank, kungcono ukusebenzisa iziqhumane eziphezulu-nendawo esikhundleni se-projectiles yokubhoboza izikhali. Yebo, kuyasiza ukwazi okungenani kancane ukuthi yiziphi amaphuzu abuthakathaka amathangi e-World of Tanks okufanelekile ukuhlose kuqala. Mayelana nalokhu kamuva kusihloko sethu.
Yiziphi izindawo amathangi abuthakathaka: ulwazi jikelele
Okokuqala, kufanelekile ukukhumbula ukubukeka kwazo zonke izinhlobo zezimoto ezikhaliwe. Isici esivelele kubo kukhona ukubonakala kuyo yonke indawo yangaphandle yamashidi amakhulu, adlala indima yezikhali. Kodwa-ke, ngisho nasemadongeni enqaba enqoleni yeselula ku-game WoT, izindawo ezibuthakathaka zamathangi zenzeka. Okokuqala, lezi yizikhala zokubukwa lapho abasebenzi bezemoto babheka khona ngesikhathi sempi. Uma ungaphakathi kulezimbobo, ungakhubaza abasebenzi. Okwesibili, yi- undercarriage, okungukuthi, amathrekhi wesundu. Kuhlale kulula ukushayela imoto engenamandla. Okwesithathu, leli yi-gap encane ephakathi kwesigodi se-tank nombhoshongo. Ukulimaza le ndawo, ungalimaza uhlelo lokulawula i-turret, okungukuthi, ukunciphisa ngokuphelele isitha sekhono lokuhlela i-cannon kulesi sitshelwa. Okokugcina, indawo yokugcina izinhlamvu kanye ne-fuel tank yomshini kubhekwa njengengozini. Ngokubashaya, ucasula ukuqhuma noma ukuqhuma kwemishini yezitha.
Ungakhubaza kanjani i-chassis yetanki?
Njengoba sesifundile kakade, izindawo ezibuthakathaka kakhulu zamathangi e-World of Tanks ziyizibungu noma izidakamizwa. Ukuze kulungiswe inqubo yesitha, kubalulekile ukudubula kahle kule ndawo. Kubalulekile hhayi nje ukufaka amaqoqo ambalwa kumathrekhi wesibungu, kodwa ukungena emgodleni ongemuva noma ngaphambili. Ngaphezu kwalokho, kunomqondo omuhle kulo mqondo kwamaloli amagobolondo aphezulu, angaphazamisa isibungu ngisho nalapho ehlasela umzimba.
Akulula kakhulu ukukhubaza izisebenzi ezifihla embhoshongweni, kodwa akukho okuyinkimbinkimbi kulokhu. Into esemqoka ukuthatha inhloso enhle. Ikakhulukazi lokhu kusebenza kulawo mathuba lapho unquma ukuqeda ukufakwa okuncane kwe-optical phezulu kwendikimba yamathangi. Lokhu kungenziwa kuphela ibanga elincane phakathi kwebhayisikili kanye nenhloso yakhe. Kulula ukufika emigodini yokuhlola, ikakhulukazi uma imoto yesitha ingena ekuhlaselweni kwangaphambili. Uma kwenzeka umonakalo, i-mechanic yokushayela ithangi iboniswa, okusho ukuthi isitha selahlekelwe ikhono lokuqondisa futhi senze kube lula kuwe. Futhi ezindaweni ezibuthakathaka zamathangi e-World of Tanks zifaka izintambo namafasitela ezindaweni ezingezansi zehholo nombhoshongo.
Uma isiphetho sikunike ngesipho, futhi ithangi lesitha liphakeme kancane kunemoto yakho, kufanele ucabange ngokudubula eshidi layo eliphansi lokuzivikela. Kulesi simo, wena cishe unama-80% ungabhubhisa bonke abasebenzi bezitha. Kubalulekile ukucabangela into eyodwa kuphela: udinga ukudubula emotweni yempi endaweni, esendaweni eyi-1/3 kusukela enqenqemeni, ngoba yilapho abasebenzi bekhona khona.
Indlela yokufeza ukushisa kwethangi?
Incazelo yamathangi iveza ukuthi indawo ebuthakathaka kule hlobo lobuchwepheshe yinkampani ye injini, futhi, ngaphezu kwalokho, ivame ukutholakala eduze kwamathangi okushisa. Ukushaya akukona nje kuphela ukunciphisa kakhulu isivinini somshini wesitha, kodwa futhi kubangele ukuthi sishaye. Ngokuvamile izisebenzi azikwazi ukucisha umlilo oye wafaka imoto, ngakho-ke phakathi nemizuzwana embalwa uhlala nje kuphela. Okokuqala, lokhu kusebenza emathangi okwenziwa eJalimane , ngoba asebenza kuphethiloli enokushisa kakhulu. Amagobolondo afaneleke kakhulu okudubula egumbini lejinjini abhekwa njengamanzi. Ngezinye izikhathi i-volley eyodwa ngokwanele yanele ukuvula ithangi lesitha esihlathini.
Izinhlelo ukwenza lula umdlalo: "izikhumba" ze-WoT
Muva nje, abadlali, abanomlutha womdlalo ku-World of Tanks, baye baba izinhlelo ezithandwayo ezenzelwe ukukhomba kumathangi amaphuzu abuthakathaka. Ngokufaka isofthiwe engezayo (okuthiwa "isikhumba"), isidlali sizokwazi ukuthola izindawo eziningi ezigxotshiwe futhi zihlose ngokunemba kakhulu. Ngokusho abadlali abanolwazi, lokhu okungeziwe kuyasiza kuphela esiteji sokuthandana nomdlali we-WoT, bese kungasuswa noma kususwe ngokuphelele. Iqiniso liwukuthi emva kokufaka le mod, amathangi athola imibala engavamile, ukukhanya okuhambisana ngqo nesilinganiso sokuvikelwa kwezikhali. Ekuqinisekiseni kwabadlali abaningi, lokhu kwenza kube nzima ukugxila ku-gameplay.
Njengomdlalo othi "Bearded" thatha umagazini: amathiphu
"I-Bronesite" Yezwe LamaTanki - izibalo zamathuluzi
Amakhohlisi ku-Deus Ex: Ukuguquka kwe-Human in amasampuli amaningana
I-Motherlode - iyini futhi ivelaphi?
Indlela thunga embhedeni amashidi nge band nokunwebeka? Lula nenduduzo ngezandla zabo
Calories: Pita mncane. Izinzuzo kanye efanele ibe kuhlu lokuhlukumezeka ka lavash
Funda indlela ukufihla abangane "VKontakte"
Ukukhulelwa kwesikhathi eside
Inani okuthiwa Stephanie noStephanie
"Omron" (nebulizer): ukubuyekezwa. Nebulizer "Omron" compressor: Izibuyekezo
"BMW E34 525" - Classic "Bavarian" nge iminyaka engu-30 yomlando